परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अख्तियार प्रमुख ! - Media Dabali
कांग्रेसपछि सबै सांसद र नेताहरूलाई ‘हाईअलर्ट’ बस्न प्रचण्डको कडा निर्देशन, सत्ताको खेल गहिरिँदै
विप्लवसँग सरकारले गर्‍यो यस्तो ३ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर (प्रेस नोटसहित)
प्रधानमन्त्री बन्न पाइने देखेपछि सभापति देउवाले बोलाए पदाधिकारी बैठक
विप्लवलाई फाइदा पुग्ने गरी सरकारले दियो देशभर यस्तो नयाँ निर्देशन
सरकार र विप्लवबीच ‘चमत्कार’ : ४ मन्त्री दिएर सरकारमा ल्याइँदै, चुनावसम्मै गठबन्धन !
शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन यी नेताहरूको दौडधुप, यसरी बन्दैछ सहमति
सरकार र विप्लवबीच के हुँदैछ सहमति ? संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरिने
जनतालाई मार पर्ने गरी किन बढ्छ पेट्रोलको मूल्य ? यस्तो छ रहस्य !
आइतवार, माघ ११ २०७७
काठमाडौं - शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप संविधानमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । सोहीअनुसार राज्यका हरेक निकाय खडा भएका छन् । त्यसमा संवैधानिक अंग र आयोगको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
संवैधानिक अंग र निकायमा सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुनु हुन्न भन्ने मान्यता छ । सरकारले गरेका काममा कहीँ गल्ती र कमजोर भएका छन्, भ्रष्टाचार र आर्थिक हिनामिना भएको छ वा अन्य कुशासन भएको छ भन्ने कुरा अख्तियार, मानवअधिकार आयोगले अध्ययन र अनुसन्धान गर्छ । र, कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्छ ।
तर, केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि राज्यका सबै संवैधानिक अंग र निकायमाथि हस्तक्षेप गरिएको छ । आफू अनुकूल चलाइएको छ । जसले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको खिल्ली उडाइएको छ । तैपनि ओली आफूले गज्जबको सरकार चलाएको भनेर दाबी गर्न छाडेका छैनन् ।
यसैबीचमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले शनिबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘अब अख्तियारमा रहेका धुलोले पुरिएका फाइलहरू खुल्छ’ भने अभिव्यक्ति दिए । अख्तियार संवैधानिक अंग हो । अख्तियारबारे कि प्रमु्ख आयुक्तले बोल्छन्, कि त आयोगका प्रवक्ताले जानकारी गराउँछन् । तर, सरकारकै मन्त्रीले अख्तियारको धुलोले पुरिएको फाइल खुल्दैछ भनेर अहिले किन बोले ? भन्ने विषयले व्यापक तरंग सिर्जना गरेको छ । के मन्त्री ज्ञवाली अख्तियारका प्रमुख आयुक्त हुन् ? भन्ने जिज्ञासा आमजनताले उठाएका छन् ।
ओली सरकारले आफूलाई शक्तिशाली बनाउन हिजो विभिन्न भ्रष्टाचारका मुद्दा अख्तियारको तामेलीमा रहेका र अनुसन्धान गर्न बाँकी रहेकालाई छानबिन अघि बढाइने र जेल हाल्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । सोहीअनुसार मन्त्री ज्ञवालीले यस्तो धम्कीको अभिव्यक्ति दिएको बताइन्छ ।
केही दिनअघि नेकपा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ओलीले आफू र प्रचण्डलाई सकिङ न्युज दिन्छु भनेर जेल हाल्ने तयारी गरेको खुलाएका थिए । ज्ञवालीको यो अभिव्यक्तिले नेता नेपालको भनाइलाई पुष्टि गर्न खोजेको देखिएको छ । ओली प्रधानमन्त्री भएदेखि अख्तियार उनकै खटनपटनमा चलेको बताइँदै आएको छ । भ्रष्टाचारले डामेका प्रेमकुमार राईलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त नियुक्त गरिनुले पनि ओली सरकारको चाहना प्रस्ट हुन्छ ।
यतिबेला ओली सरकारको ध्यान पूर्वमाओवादी लडाकू शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको फाइल खोल्नेमा देखिएको छ । ओलीले शनिबार केही पूर्वमाओवादी लडाकूलाई आफ्नो पार्टीमा भित्र्याउनुले उनी जसरी पनि प्रचण्डको राजनीति सखाप पार्ने रणनीतिमा रहेको प्रस्ट हुन्छ । प्रदीप ज्ञवालीको शनिबारको धम्की पनि त्यसकै कडीका रूपमा आएको बताइन्छ । पूर्वमाओवादी लडाकू शिविर व्यवस्थापन र लडाकूको भत्तामा करिब चार अर्ब अनियमितता भएको दाबी गरिँदै आएको छ । जसमध्ये माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला धेरै रकम बाँडिएको थियो ।
केपी ओलीकै लाइनमा प्रचण्ड पक्षका सबै सांसद, अग्नि सापकोटाको योजना ‘फेल’
कांग्रेसको भाग्य चम्कियो, केपी ओलीले फोनबाटै ‘अफर’ गरेपछि देउवाको यस्तो जवाफ !
केपी ओलीप्रति पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराईको विश्वास !